विश्वकपमा कुन देशको पक्षमा नेपालीहरु (भिडियो सहित), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
विश्वकपमा कुन देशको पक्षमा नेपालीहरु (भिडियो सहित)
काठमाडौं । विश्वभरका खेलप्रेमीहरुको लागि पर्व भित्रिएको छ। त्यो पर्व, चार-चार वर्षमा आउने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हो जसले विश्वभरका मानिसहरुलाई एकै ठाउँ केन्द्रित गर्ने गर्छ।
चार वर्षको अन्तरालपछि यसवर्ष अर्थात २०१८ मा विश्वकप पर्व भित्रिएको छ। विश्वकप २०१८ जुन १४ देखि जुलाई १५ सम्म रुसमा हुँदैछ। यो एक महिना अवधिभर फुटबलका हस्तीहरु एकैठाउँ देखिनेछन् भने विश्वभरका मानिसहरुको ध्यान पनि एकैठाउँमा केन्दित हुनेछन्।
जसको प्रभाव नेपालमा पनि देख्न सकिन्छ। विश्वकप सुरु हुनु अगाडी देखि नै सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु आफूले समर्थन गर्ने देश र खेलाडीहरुबारे पोस्ट गरिरहेका छन्।
त्यस्तै, नेपाली बजार पनि रंगीचंगी जर्सीहरुले सजिएको छ। नेपाल विश्वकपमा पुग्न धेरै वर्ष लाग्ने बुझेका नेपालीहरु आफूले समर्थन गर्ने देशकै लागि भएपनि उत्साहित छन्। अधिकांश नेपाली युवाहरु लेओनल मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो र नेइमारको प्रशंसक छन्। जसको प्रभाव वल्डकपमा पनि देख्न सकिन्छ।
विश्वकप बारे सोधिएको प्रश्नमा अधिकांश युवा मेस्सीको टिम अर्जेन्टिना, त्यसपछि रोनाल्डोको टिम पोर्चुगल र नेइमारको टिम ब्राजिलको पक्षमा देखिएका छन्। नेपाली युवाहरुले समर्थन गरिरहेका अरु देशमा जर्मनी, बेल्जियम आदि देखिएका छन्।